Dawladda Itoobiya Oo Siyaasiyiin Ka Soo Jeeda Kililka 5aad Kala Doorran-siiyey Saddex Qoddob Oo Ay Xal u Aragtay | Marsa News
Dawladda Itoobiya Oo Siyaasiyiin Ka Soo Jeeda Kililka 5aad Kala Doorran-siiyey Saddex Qoddob Oo Ay Xal u Aragtay
August 9, 2018 - Written by editor marsan
Wararkii U Dembeeyey Ee Shir Illaa Habeen Badhkii Xalay Addis Ababa Uga Socday Dawladda Itoobiya & Siyaasiyiin Kasoo Jeeda Kililka 5aad
Hargaisa:(Marsanews) Kulamo xidhiidh ah oo galabnimadii shalay u bilowaday laba dhinac oo kala matalayay dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya iyo dad u badan siyaasiyiin, madax dhaqameedyo, aqoonayanno iyo waxgaradka Soomaalida Itoobiya ayaa lagu lafo guray waxa laga yeelayo xaallada cakiran ee dawlad deegaanka soomaalida kililka shanaad ee dalkaas, kadib qaskii iyo rabshadihii halkaas ka bilowday sabtidii la soo dhaafay ee sahayday madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar kaasi oo xallintiisu hal xidhaale ku noqotay dawladda iyo guud ahaanba dal weynaha Itoobiya. Kulamadan oo ilaa saacadihii dembe ee xalay saqdii dhexe lagu gaadhay ayaa ilo wareedyo u dhuun daloola shirkaasi ay tibaaxeen in dawladda dhexe ay miiska soo saartay qorshe si gaar ah uga hadlaya maamulka dawlad deegaanka Jigjiga kadib is casilaadii madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar, isla markaana madaxweynaha cusub loo doortay maamulka, kaasi oo haatan ku sugan magaallada jigjiga.
Wararkii U Dembeeyey Ee Xaalladda Madaxweyne Cabdi Iley Iyo Halka Uu Ilaa Haatan Ku Sugan Yahay
Warar is khilaafsan oo tan iyo markii uu is casilay madaxweynihii dowlad deegaanka soomaalida ee Cabdi Maxamuud Cumar kasoo baxayay dalka itoobiya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xaaladiisa iyo halka uu ku sugan yahay kadib markii diyaarad millatarigu leeyahay jigjia kasoo qaaday.
Wararka qaar ayaa sheegaya in uu Cabdi Maxamuud Xidhan yahay halka kuwa kalena ay tibaaxayaan in uu xabsi guri ku jiro oo uu weli ku sugan yahay magaalada Adis ababa, sidaasi si ka duwanna warar kale ayaa sheegaya in madaxweyne Abdi iley aanu xidhnayn balse ay ciidammada ammaanka ee dawladda federaalku amnigiisa ku sugayaan guriga uu magaalada addis ababa qoyskiisu ka degenaa,halkaas oo ay ku sugan yihiin xaasaskiisa mid kamid ah iyo saraakiil kamid ah hoggaamadii bilayska ee DDSI. Dadweyanaha ku dhaqan magaalada Jijiga ayaa ku sugan xaalad hubaanti la’aan ah oo ay dhagaha u tagaayaan waxa dhici kara. Warar uu wargeyska HUBAAL Ka helay ilo wareedyo ku sugan magaalada Jigjiga ayaa sheegay in illaa xalay ilaa shalay galab hawada magaaladaasi lagu arkayay laba diyaaradood oo kuwa dagaalka ah oo jog hoose ku duulayay kuwaas oo ku wareegayay magaalada.
Geesta kale shir fiidnimadii xalay u bilaabmay maamulka dawlad deegaanka DDSI oo uu shirguddominayay madaxweynaha cusub ee la doortay isla markaana ay ka qayb galeen masuuliyiin ka tirsan xisbiga talada haya ee deegaankaas ayaa la sheegay in ay kaga hadleen xaallada magaallada iyo guud ahaanba gobolka Soomaalida sidii loo xaslin lahaa isla markaana maamulka cusubi u diyaarin lahaa qorshe uu ku abaaro shaqadiisii u horeysay.
Waxa kale oo wararka lahelayaa sheegeen in ay magaalooyinka waaweyn ee DDSI ay amnigooda gacanta ku hayaan lana wareegeen ciidamada millatariga ee gaashaaman kuwaas oo aan iyagu la hadlayn dadka balse kala didinaya wixii ka badan toban qof ee bar kulan isugu yimaada. Ciidamadan ayaa la sheegay inay xidheen labada wado ee magaalada Jigjiga uga baxa dhinaca Qarbi daharre iyo dhinaca Wajaale, iyaga oo cidii ka baxaysa magaallada ama baabuurta u socda labadaas deegaan u diidaya inay ka baxaan magaallada. Taasina waxa lagu macneeyey mid ciidanku kaga hortagayo in dadka ka qaxaya magaallada ee u socda magaallooyinka wajaale iyo Qarbi daharre ay muujin karto mid ka turjunta degenaansho la’aan iyo amni xumo ka jirta caasimaddii gobolka. Ciidamada Liyuu boolis eek u sugnaa magaalada Jigjiga ayaa iyaguna gebi ahaanba ka baxay goobihii iyo xeryahoodii iyaga oo isku urursaday deegaanka Shilaabo.